निस्कियो सुनुवार भाषा र लिपिमा पत्रिका - Naya Online
निस्कियो सुनुवार भाषा र लिपिमा पत्रिका
शुक्रबार, भदौ ११, २०७८ (August 27th, 2021 at 1:16pm ) मुख्य समाचार, समाचार
ललितपुर, ११ भदौ । नेपालका ५९ आदिवासी जनजातिमध्येको एकजाति सुनुवार जातिको भाषा तथा लिपिमा पत्रिका प्रकाशन हुन थालेको छ ।
२७ औं विश्व आदिवासी दिवस –२०२१ को अवसर पारेर गत अगष्ट ९ मा हाम्सो (उज्यालो) मासिकको प्रकाशन आरम्भ भएको हो । कोइँच लिपि र देवनागरी लिपिमा प्रकाशन हुने पत्रिकामा भाषा कोइँच (सुनुवार) र नेपाली रहेको छ ।
यस पत्रिकाको प्रकाशनसँगै नेपालमा लिपिबाट प्रकाशन हुने संख्यामा थप भएको छ । लिम्बू जातिले प्रयोग गर्दै आएको सिरिजङ्घा लिपिलाई सम्पूर्ण किरातहरुले साझा बनाउने चर्चासँगै यस लिपिबाट पत्रिका प्रकाशनले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
किरात बाम्बुले भाषामा किरात सिरिजङ्घा लिपिमै केही वर्णहरु थपघट बनाएर बाम्बुले लिपिको टिटिएफ फन्ट प्रयोगमा ल्याइएको छ । तर सुनुवार भाषाको यो फन्ट मुक्दुम, मुक्दुम १ र काःतिच नामबाट बनाइएको छ ।
के यो लिपि अस्तित्वमा थियो ?
यसै पत्रिकामा जनाइए अनुसार पूर्व २ नं. दोलखाको सुरीखारीमा यस लिपि भेट्टाइएको हो । सुनुवार भाषामा लिपिलाई कोइँच ब्लेअस भनिन्छ । छालामा खोपिएको लिपिलाई दोखु काउले ताप्लेजुङका हेमकर्ण सुनुवारले वि.सं. १९४३ मा छालामा खोपेर सारी सम्मेलन गरी प्रचारप्रसार गरे । लिपि प्रवद्र्धक कर्णबहादुर चेँःतिचका अनुसार हेमकर्णका छोरा खोँडे सुनुवारसँग पछिसम्म उक्त छालामा सारिएको लिपि पेटारोमा बेरेर राखिएको थियो ।
शुरुमा अंक नभएको यस लिपिमा सेमलोसी (श्यामलक्ष्मी) र गंगामाया सुनुवारले अंक थपेका हुन् ।
वि.सं. १९४७ मा दोखु काउले ताप्लेजुङमा तालुकदार नरध्वज लिम्बूको आतिथ्यतामा दोश्रो सम्मेलन भयो । यस सम्मेलनमा सिक्किमदेखि दोलखासम्मका सुनुवार भेला भएका थिए । हेमकर्ण सुनुवारको अगुवाईमा उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
कर्णबहादुर सुनुवारले उक्त लिपिलाई धरान ल्याई प्रचारप्रसार गरेका थिए । २०२९ सालमा काठमाडौं ल्याई प्रचारप्रसार गरिएको लिपिलाई दार्जिलिङ सिक्किम पु¥याई २०४७ सालमा सुनुवार ज्ञानमाला हाते पुस्तकको प्रकाशन भएको थियो ।
सिक्किम सरकारले सिक्किमे जनताले बोल्ने सबै भाषालाई सुचीकरण गर्दा सुनुवारको भाषा र लिपि पनि सूचीकरणमा पर्‍यो र सन् १९९५ मा कोइँ भाषा लिपिले प्रान्तीय भाषाको रुपमा मान्यता पाई सिक्किम हेराल्डमा नियमित प्रकाशन भइरहेको छ भने कक्षा ५ सम्म पुस्तक प्रकाशन भएको छ ।
हातले लेखेर या लिथोबाट छापिने भाषा लिपिलाई डा. लाल रापचाले श्यामकुमार राईको सहयोगमा किरात १ टिटिएफ फन्ट बनाई कम्प्युटरमार्फत लेख्न सजिलो भयो । यसलाई कोइँच बोलीमा हुवहु लेख्न सकियोस् भने थप परिमार्जनसहित फन्ट बनाइएको छ भने युनिकोड पनि निर्माण भइरहेको छ ।
५ स्वरवर्ण र २८ व्यञ्जनवर्ण रहेको कोइँच लिपि सुनुवार उच्चारणको आधारमा तयार पारिएको उल्लेख छ ।
प्रकाशमा लक्ष्मीराम र सम्पादकमा देवकुमार सुनुवार
हाम्सोको प्रकाशकमा लक्ष्मीराम सुनुवार रहेका छन् भने सम्पादकमा देवकुमार सुनुवार छन् । त्यसैगरी सहसम्पादकमा कोइँचबु काःतिच, समिर मुखिया र शोभा सुनुवार छन् । व्यवस्थापक पाम सुनुवार छन् ।
यस अंकमा कोइँच लिपिको इतिहास, वर्णमाला, किवोर्डमा फन्टको स्थान, बालबालिकाको सनुवार भाषमा राखिएको नामसहितको परिचय विशेष छन् ।